FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA SPANIEL WATER TWEED - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Spaniel Water Tweed
Ny alika Tweed Water Spaniel lany tamingana
Ny Tweed Water Spaniel dia saika loko volontany amin'ny atiny feno volo olioly miaraka amin'ny rambony lava lava. Ny sofiny dia niampatra teo amin'ny sisin'ireo alika ary nisy volom-borona olioly. Alika lehibe izy ireo ary azo ampitahaina amin'ny roa Spaniel Rano Irlandey ary ny maoderina Golden Retriever . Nanan-tsofina lava kokoa sy molotra somary latsaka izy ireo.
Fantatra tamin'ny alàlan'ny fitiavany rano sy manjono eny amoron'ny morontsiraka ireto alika ireto. Sady manan-tsaina izy ireo, mahatoky ary sariaka be.
mix chow chow basset hound
Haavony: 20-24 santimetatra (51-61 cm)
Lanja: 55-75 pounds (25-34 kg)
Satria efa lany tamingana ity alika ity ary tsy misy firaketana ny olana ara-pahasalamana, dia afaka mihevitra fotsiny ny olona fa ny olana ara-pahasalamany dia hitovy amin'ny an'ny Golden Retriever na waterdog hafa. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ny dysplasia hip, ny aretina Addison, ny cardiomyopathy, ary maro hafa. Araka ny voalaza teo aloha, tsy misy porofo manamarina izany olana ara-pahasalamana izany satria efa lany tamingana izy ankehitriny.
Alika lehibe ireo alika ireo ary mety mila toerana bebe kokoa raha oharina amin'ny alika kely kokoa. Fantatra fa mpanao fanatanjahan-tena izy ireo, ka mety ho nila tokotany sy na mpanelanelana amin'ny trano lehibe handehanana.
alika mena aostraliana mena mifangaro husky
Ireo alika ireo dia mila fampihetseham-batana mendrika ary tia milomano amin'ny rano rehetra. Tokony nila nandeha an-tongotra isan'andro izy ireo ary angamba mila tokotany na toerana iray hihazakazahana sy hilalaovana.
10–12 taona eo ho eo
Ireo volo ireo dia lava volo olioly ary mety nila namboarina matetika mba hisorohana knot sy tsihy. Angamba tsy mila nandro ihany izy ireo raha ilaina izany.
Ny Tweed Water Spaniel dia nipoitra avy amin'ny alika rano hafa manodidina ny faritry ny ranomasina Berwick any Ekosy. Ny alika rano monina any Ekosy dia nompiana tamin'ireto Terre-Neuve alika na alika maty taloha, ny Alika Rano St John .
Avy amin'ny taratasy nosoratan'i Stanley O'Neil tamin'ny taonjato faha-19 izay fantatry ny olona amin'ny karazany retriever, dia fantatray fa ny mpanjono dia nampiasa ny Tweed Water Spaniel mba hanampiana azy ireo hitondra harato lehibe eny amoron-dranomasina. Nofaritany fa ilay Tweed Water Spaniel dia manana volo mainty volo ary mitovy amin'ny alika retriever kokoa noho ny spaniel. Tao amin'ny taratasiny dia nilaza taminy ilay mpanjono fa avy any Berwick, any Ekosy ilay alika.
Ny sasany milaza fa ny Tweed Water Spaniel dia anarana voalohany an'ny Golden Retriever na dia manaporofo aza fa diso izany. Ny laharam-piterahana feno an'ny Golden Retriever dia voarakitra an-tsoratra ary nanambara fa telo ny Spaniels Water Tweed dia nompiana ary nampiasaina mba hamoronana Golden Retriever.
Raha toa ka mainty na volontany ny Spaniels Water Tweed tany am-boalohany, tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19, dia nanomboka nisy volony mavo na volamena maivana ny sasany. Ireo alika ireo dia voalaza fa naterak'i Sir Dudley Coutts Majoribanks fantatra amin'ny anarana hoe Lord Tweedmouth ihany koa. Ny Spaniels Water Tweed Water vaovao dia nantsoina ho nompiana amin'ny retriever mifono miloko antsoina hoe Nous ary Spaniel Water Tweed Water antsoina hoe Belle. Ity fako ity dia namokatra alika kely efatra misy volony mavo antsoina hoe Ada, Cowslip, Crocus, ary Primrose. Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka niantso ireo alika vaovao ireo Golden Retrievers izy ireo. Ny Tweed Water Spaniel dia nosoloan'ny Golden Retriever tsikelikely.
Lisitry ny zana-alika lany tamingana
Bulldog anglisy 8 volana
"eskimo amerikana" "akoho spaniel" akoho a mo
alika fotsy lehibe pyrenees lehibe